CrackMe (Test6) - Hard Level [Software]
Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Reverse Engineering » CrackMe (Test6) - Hard Level [Software]
1 CrackMe (Test6) - Hard Level [Software] on 21st September 2009, 12:32 pm
၀ါသနာရှင်များ စမ်းသပ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
နည်းနည်းလေးတော့ ခက်ပါလိမ့်မယ်။ (သို့) တော်တော်လေး လက်ဝင်ပါလိမ့်မယ်။ [You must be registered and logged in to see this image.]
2 Re: CrackMe (Test6) - Hard Level [Software] on 22nd September 2009, 4:38 pm
ဘာလို့လည်း မသိဘူး run တာ error တက်နေတယ်
အစ်ကို အချိန်ရမယ်ဆိုရင် တစ်ချက်လောက် ပြန်ကြည့်ပေးပါဦး
3 Re: CrackMe (Test6) - Hard Level [Software] on 29th September 2009, 1:26 pm
ဟုတ်တယ်။ MessageBoxA API ရဲ့ virtual address ကြောင့်။ ဒါကို address ပြောင်းပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ပြီးမှ crack ပါ။
4 Re: CrackMe (Test6) - Hard Level [Software] on 30th September 2009, 12:09 pm
rhythm wrote: ဟုတ်တယ်။ MessageBoxA API ရဲ့ virtual address ကြောင့်။ ဒါကို address ပြောင်းပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ပြီးမှ crack ပါ။
အစ်ကို နောက်တစ်ခါလာလို့ အချိန်ရရင် နည်းနည်း ပြန်ရှင်းပြပေးနော်။ ကျနော်က တော်တော်ပိန်းလို့ မသိဘူးကူညီပါနော်။
5 Re: CrackMe (Test6) - Hard Level [Software] on 5th November 2009, 4:40 pm
Olly နဲ့ ဖွင့်တဲ့အခါ အောက်ပါအတိုင်း MessageBox API ရဲ့ virtual address ကိုတွေ့ရပါတယ်။ API address (dll address)ဟာ Windows version ပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် MessageBox ကို ခေါ်သုံးတဲ့ address နေရာတွေမှာ MessageBoxA လို့ ရိုက်ပြီး Olly မှာ save လုပ်လိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားမှာပါ။
လို့ ပြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
6 Re: CrackMe (Test6) - Hard Level [Software] on 5th November 2009, 5:03 pm
အော် အော်။ နားလည်ပြီ။
ဒါနဲ့ ကျနော်သိချင်တာကဘာလို့ 77D8050B ဖြစ်ရတာလဲဆိုတာပါ။
စရေးကတည်းက Error လား။ ဒါမှမဟုတ်ရင် ?
7 Re: CrackMe (Test6) - Hard Level [Software] on 5th November 2009, 5:17 pm
Windows XP SP2 Kernel32.dll (သို့) user32.dll ရဲ့ MessageBoxA API ရှိရာ နံပါတ်ပါ။
သေချာနားလည်ချင်ရင်တော့ IAT နှင် API Redirection အခန်း ကို ဖတ်ပါ။
ဘာကြောင့် error တက်ရတာလဲဆိုတော့ ဒီ MessageBoxA API ကို Borland C++ နဲ့ ရေးထားတာ မဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် Olly မှာ ရေးပြီး save လုပ်ထားတာမို့လို့ပါ။ [You must be registered and logged in to see this image.]
8 Re: CrackMe (Test6) - Hard Level [Software] on 5th November 2009, 5:22 pm
rhythm wrote: Windows XP SP2 Kernel32.dll (သို့) user32.dll ရဲ့ MessageBoxA API ရှိရာ နံပါတ်ပါ။
အော် Olly နဲ့တောင် ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရေးတယ် [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
9 Re: CrackMe (Test6) - Hard Level [Software] on 5th November 2009, 5:28 pm
ရေးတာထက် ရှိပြီးသား နေရာလွတ်မှာ ၀င်ပြင်တာလို့ ပြောရင် မှန်ပါလိမ့်မယ်။
10 Re: CrackMe (Test6) - Hard Level [Software] on 5th November 2009, 5:34 pm
rhythm wrote: ရေးတာထက် ရှိပြီးသား နေရာလွတ်မှာ ၀င်ပြင်တာလို့ ပြောရင် မှန်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါဆို ထပ်ပြီးတော့ လျှာရှည်ဦးမယ်နော် ဟီး။
ဘာလို့ အဲလိုလုပ်ထားရတာလဲဟင်??? တကယ်မသိလို့မေးတာပါနော်။ တော်ကြာ လျှာရှည်လို့ ကျနော့်ကို စိတ်ဆိုးသွားဦးမယ်။
11 Re: CrackMe (Test6) - Hard Level [Software] on 5th November 2009, 5:39 pm
မဆိုင်တာတွေတောင် လျှောက်ဆွေးနွေးဖြစ်သွားပြီ။ CrackMe ကိုလဲ စမ်းကြည့်ပါဦး။ [You must be registered and logged in to see this image.]
12 Re: CrackMe (Test6) - Hard Level [Software] on 15th December 2009, 6:45 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-10-31
ကျွန်တှောကိုယ်တိုင် ရှာထားတဲ့ serial တော့ မဟုတ်ပါဘူး
မိတ်ဆွေ တစ်ယောက် ရှာထားတဲ့ serial လေးပါ........
z can be any character
13 Re: CrackMe (Test6) - Hard Level [Software] on 26th December 2009, 1:43 pm
စမ်းကြည့်ပါဦး။ ကြိုက်တဲ့ဂဏန်းတော့ ရိုက်ထည့်လို့ မရပါဘူး။ key တွေကို တစ်လုံးချင်းပေါင်းပြီး loop ပတ်ထားတာမို့လို့ပါ။ [You must be registered and logged in to see this image.]
14 Re: CrackMe (Test6) - Hard Level [Software] on 30th December 2009, 7:55 pm
ဟုတ်ကဲ့ စမ်းကြည့်လိုက် ပါ့မယ် .......ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် စမ်းတုန်းက ရတယ်ထင်တယ်
အစ်ကိုရေထားတဲ့ CRACKME(TEST6) က တချို့WINDOW နဲ့ အဆင် မပြေ ဘူး DON'T SEND ပြနေတယ်
15 Re: CrackMe (Test6) - Hard Level [Software] on 30th December 2009, 8:05 pm
လုပ်ကြဗျာ။ ကျနော်တော့ ဒီလိုင်းကနေ ခဏပြန်ထွက်သွားရပြီ။
16 Re: CrackMe (Test6) - Hard Level [Software]